सङ्क्रमित आमाबाट स्वस्थ जुम्ल्याहा | eAdarsha.com
चितवन, १५ असार। भरतपुर अस्पतालमा एक एचआइभी सङ्क्रमित आमाबाट स्वस्थ जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिएका छन्।
बच्चाका बाबु पनि एचआइभी सङ्क्रमित नै हुन्। चितवनको माडी नगरपालिका घर भएका ती दम्पत्तिले यही असार ४ गते भरतपुर अस्पतालमा सुरक्षित बच्चा जन्माएका हुन्। उनीहरूबाट जन्मिएका दुर्इ छोराको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। सुरुमा परीक्षण गर्दा दुवै बच्चामा एचआईभी सङ्क्रमित भेटिएको छैन। जन्मिएको ४२ दिनपछि डिएनए डिसिआर परीक्षण गरेपछि सङ्क्रमित भए/नभएको पत्ता लाग्ने चिकित्सकले बताएका छन्। प्रारम्भिक परीक्षणमा सङ्क्रमित नदेखिएकाले सङ्क्रमित मुक्त हुने सम्भावना बढी हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
एड्स हेल्थ फाउण्डेसन -एएचएफ) नेपाल भरतपुर अस्पतालले सङ्क्रमित महिलालाई सुरक्षित बच्चा जन्माउन सहयोग गर्दै आएको छ। एएचएफ नेपाल भरतपुर अस्पतालका कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार, सन् २०११ बाट हालसम्म सङ्क्रमित आमाबाट ७१ बालबालिका जन्मिएका छन्। नियमित औषधी सेवन गरेका आमाहरुबाट जन्मिएका बच्चा सुरक्षित छन्। अस्पतालमा जन्मिएका ती बच्चामध्ये दुर्इ जनामा सङ्क्रमित देखिएको छ भने तीन जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य ६६ बच्चा स्वस्थ छन्।
भरतपुर अस्पतालका प्रसूति रोग विभाग प्रमुख डा. सुनिलमणि पोखरेलले एचआइभी सङ्क्रमित आमाहरूलाई अस्पतालमा अन्यलाई भन्दा प्राथमिकतामा राखेर उपचार र बच्चा जन्माउँदा शल्यक्रिया गर्ने गरेको बताए। नियमित एआरटी प्रयोग गरेका आमाबाट जन्मिएका अधिकांश बच्चा संक्रमणमुक्त रहने गरेको पोखरेलले बताए।
फाउण्डेसनका चिकित्सक डा. उन्नत श्रेष्ठ नियमित औषधी सेवन गर्ने, सावधानी अपनाउने र सुत्केरी गराउन अस्पताल आउने सङ्क्रमित आमाहरूबाट सङ्क्रमितरहित बच्चा जन्मिने सम्भावना धेरै हुने बताउँछन्। औषधी प्रयोग नगरेका आमाहरुबाट जन्मिएका बच्चामा चार जनामध्ये एक जनामा एचआईभी सङ्क्रमित सर्ने सम्भावना रहने गरेको तथ्याङ्क रहेको बताउँदै डा. श्रेष्ठले औषधी सेवन गरेका र उच्च सतर्कता अपनाएका आमाबाट जन्मिएका अधिकतम बच्चा सङ्क्रमितमुक्त हुने गरेको बताए।
बच्चा जन्मदा सङ्क्रमित आमाको रगतमा बढी लतपत हुने र जन्मिएपछि बच्चालाई ६ हप्तासम्म नेभिरापिन नामक औषधी खुवाउनुपर्ने हुँदा बच्चा जन्माउँदा अनिवार्य अस्पतालमा आउन डा. श्रेष्ठले संक्रमित आमालाई सुझाव दिए। बच्चामा आमाको रगतको लतपत कम होस् भन्नका लागि यस्ता आमाको शल्यक्रिया गरी सुरक्षित तरिकाले बच्चा निकाल्ने गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
भरतपुर अस्पतालकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. मोना श्रेष्ठ एचआईभी सङ्क्रमित आमाबाट बच्चा जन्माउन धेरै अस्पताल र चिकित्सकले नमान्ने भए पनि आफूहरूले भरतपुर अस्पतालमा सङ्क्रमित आमाहरूलाई बच्चा जन्माउन सहयोग गरिरहेको बताइन्। चिकित्सकहरुले गर्भ रहनुभन्दा दुर्इ वर्ष अघिदेखि एन्टीरेट्रोभाईरल थेरापी प्रयोग गर्दै आएका र सिडि फोर (रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता) को तह पाँच सय भन्दामाथि भएका महिला अरु बढी सुरक्षित हुने गरेको बताएका छन्। स्वस्थ मानिसमा सिडिफोरको मात्रा एक हजार दुर्इ सयमाथि हुने गर्दछ।